सभापतिको डेरा डुबेपछि…. « Khabarhub
सभापतिको डेरा डुबेपछि….
काठमाडौं– संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवको बसेको कोलोनी डुवानमा पर्दा उनी पीडित बनेका छन् ।
कुलेश्वरस्थित ओरियन्ट कोलोनीको एउटा ब्लकको भुइतलामा बसेका श्रीवास्तव शुक्रवारको बाढी घर भित्र पस्दा तनावमा परेका छन् ।
बाढी कोठमा भित्र पस्दा उनका अधिकांश सामान विग्रिएका छन् । खान पकाउने कोठामा लेदो जम्मा भएको छ । कोठामा खाट, सोफा समेत डुबेको छ । कोठा डुवानमा परेपछि उनी अहिले एउटा होटलमा बसिरहेका छन् ।
पर्सा क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद श्रीवास्तव करिब १२ वर्षदेखि उक्त कोलोनिमा बस्दै आएका थिए । बाढीको समयमा आफू कोठामै रहेको र बाढीकोठामा पस्न थालेपछि भाग्नु परेको उनले बताए ।
उनलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट पीडितहरुले निरन्तर फोन गरेर राहतको व्यवस्थाको माग गरिरहेका हुन्छन् । उनको निर्वाचन क्षेत्रमा १० जनाको मृत्यु भएको छ ।‘उतावाट साथीहरुले फोन गर्नु हुन्छ, राहतको व्यवस्था गर्न भन्नु हुन्छ । मेरो क्षेत्रमा १० जना भन्दा धेरैको मृत्यु भएको छ, श्रीवास्तवले भने,‘उहाँहरु उता पीडित हुनुहुन्छ म यता पीडित भएको छु !’
बाढी पीडित भएका उनले अहिले कोठा खोजी रहेका छन् । बानेश्वमा कोठा फेला परेका श्रीवास्तवले सांसदको रुपमा आउने कोठाभाडा २५ हजारले नपुग्ने बताए । ‘बानेश्वारमा कोठाको भाडा ६० हजार भनेका छन्,’ उनले भने घरपट्टीसँग भाडा मिलाइदिन आग्रह गरेको छु । ’
सभापति श्रीवास्तव नै डुवान पीडित भएपछि आइतबार बस्ने भनिएको उद्योग तथा बाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठक स्थगित भएको थियो ।
प्रकाशित मिति : ३० असार २०७६, सोमबार ६ : ५६ बजे